“Waxaan ka dhigi doonnaa Chelsea koox aysan jecleyn inay wajahaan kooxaha ka soo horjeeda!” – Thomas Tuchel – Gool FM
(London) 28 Jan 2021. Macalinka cusub kooxda Chelsea ee Thomas Tuchel, ayaa Blues hoggaamiyay kulankiisii ​​ugu horreeyay ee xirfadiisa ciyaareed, kaasoo ay la ciyaareen Wolves.
Chelsea ayaa garoonkeeda Stamford Bridge barbaro kula dhaafi weysay kooxda Wolves, kaddib markii ay ku kala baxeen barbardhac 0-0 ah, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada Isbuuca 20-aad ee horyaalka Premier League.
Thomas Tuchel ayaa ciyaarta kaddib wuxuu la hadlay warbaahinta, wuxuuna yiri:
“Hadda wixii ka dambeeya, ma arko daciifnimo badan, waxaan diirada saari doonaa awoodeena, iyo isku dhafka cajiibka ah ee kooxda u dhexeeya ciyaartoy khibrad leh, shaqsiyaad waa weyn, iyo ciyaartoy da’ayar ah oo leh hibo una gaajeysan inay ciyaaraan.”
“Waxaan u bartay sameynta awood iyo jawi kala duwan oo u baahan in la abuuro suurtagalnimada guuleysiga seddexdii maalmoodba mar horyaal sidan oo kale ah.”
“Wixii aan shalay ku arkay tababarka waxay ahaayeen kuwo cajiib ah oo gaar ah.”
Thomas Tuchel ayaa wuxuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay xukun kulul, wuxuuna yiri:
“Waxaan dhisi doonaa koox uusan qofna dooneynin inuu la ciyaaro, caqabada i hortaagan waa inaan ku sameeyo arrintaas sida ugu dhaqsiyaha badan.”